Ukunyamekelwa kweenwele kunye ne-shampoos ezomelezayo okanye okunondlayo kunokuncediswa ngeibhola kunye neemaski ezikhethekileyo. Ibhalsam isisongweni sokomeleza iinwele, isetyenziswe kwiinwele ezimanzi ubude obude, kwaye ishiywe kwizinwele ezintathu okanye imizuzu emi-5. Emva koko i-balm yokumisa ihlanjululwa ngamanzi atshisayo kwaye ihlanjwe ngeenwele. Iibhulami zeebhokhwe zikhona kuncedo lokukhusela. Ukusetyenziswa kwabo kufuneka kukhunjiswe iinkqubo zokwelapha usebenzisa izixhobo zobugcisa kwiirononi zobuhle. Iimaski kunye neebhalms zeenwele: izilwanyana zoluhlobo esizifunda kule ncwadi.
Imaski yeenwele yindlela efanelekileyo yokugxilwa kweenwele, zibonelela ngononophelo olunzulu kunye neenwele. Ukusebenzisa iiski ngeendlela zokomeleza iinwele kunokufezekisa umphumo omhle kwaye kunciphise inani leenwele eziye zaphuma. Ukusuka kwiziqhamo ezincinci azilindele iziphumo ezilungileyo. Ixabiso eliphezulu libonelelwa ngeendleko ezinkulu zokuvelisa nokuphuhliswa kwamacandelo anikezela ngempumelelo imaski yobungcali.
Inwele yinyama efile ekhitatini. Ekukhuleni kweenwele, ngoko kufuneka usebenze xa iinwele zikwinqanaba elincomekayo, oko kukuthi, kufuneka usebenze kwi-follicle yeenwele. Ngoko ke, imaski kufuneka isetyenziswe, ngokucoca ngokucokisekileyo kwiingcambu zeenwele.
Izinwele zibe zi-silky kwaye zincinci, kanye kanye ngeveki sidla i-yolk eluhlaza, kwaye sithatha i-1 teaspoon ekuseni nakusihlwa ngaphambi kokutya umxube wepunipoon ye-honey kunye ne-½ indebe ye-juice entsha ye-horseradish juice.
Ukwenza ukuba iinwele zakho zibe zihle kwaye zikhanyise, siza kulungiselela le mixube elandelayo, eya kuhambelana nazo zonke iintlobo zeenwele.
Izinwele ezinamafutha nangemva kokuhlamba zibukeka zingabonakaliyo, ngokukhawuleza zihlambuluke, zihlangane kunye emacaleni ahlukeneyo, zihluke kwi-gloss high.
I-balm ye-Herbal kunye neoli yezobisi yemisonto eyomileyo
Sithatha isigamu sesilazi esitsha esisiweyo okanye esomileyo esengcwatshiwe okanye esomileyo, i-birch kunye namagqabi enetha, i-wort yase-St. John, i-nasturtium, i-chamomile, i-clover emhlophe kunye nesiqingatha seglasi nganye yeoli.
Siya kuthulula umxube wee-herbs ngeoli kwaye sifune iintsuku ezingama-7. Sigubha i-balm kwi-scalp, ukuyitshisa kuqala, isebenzise ihora eli-1 phambi kokuhlamba.
Ngokuqhelekileyo umzimba wethu awunalo izinto ezahlukeneyo eziphilayo kunye namavithamini. Ngoko kuyimfuneko ukukhula kweenwele eziqhelekileyo kunye nempilo. Imikhwa emibi idlala indima ebalulekileyo kule nto. Ngokomzekelo, ikhofi ikhupha izinto eziyimfuneko ezivela emzimbeni, iicicin isonakalisa. Ngenxa yoko, iinwele ziba zibuhlungu, zincinci kwaye zincinci. Ukuze ube neenwele eziphilileyo kunye ezintle, kufuneka ubeke iliso kwimpilo yakho.
Izithako: ingilazi yamanzi abilayo, iipunipo ezi-2 zengca eyomileyo ye-horsetail.
Ukulonga utshani ngamanzi abilayo, ubilise ngokushisa okuphantsi kwemizuzu engama-30. Emva koko umhluzi ucocelwe kwaye uhlanjululwe ngamanzi abilisiwe kumthamo we-200 ml. Umhluzi ufunyenwe uhluthwa ngesikhumba sekhanda 2 okanye kathathu ngeveki. Esi sixhobo esihle sokuphucula iinwele kunye nokuqinisa.
Izithako: 1 indebe ye-rum, 1 inhloko ye-anyanisi.
Makhe sixolele i-anyanisi size sithulule iglasi yeRum. Vala ukuvala umxube uze ugxininise imini. Emva koko ukufakelwa kwamanzi kufakwe. I-balm elungiselelwe iyakhutshwa kwiingcambu zeenwele. Sifaka intloko ngehekhi okanye ithawula kwaye sishiye i-balm for 1 okanye 2 iiyure. Geza ngamanzi afudumele, sebenzisa i-shampoo engathathi hlangothi. I-onion ibhalsam isetyenziswa rhoqo, ubuncinane 1 ixesha ngeveki. Iphilisa iinwele ezonakalisiweyo kwaye ikhuthaza ukukhula kweenwele ngokukhawuleza.
I-Balm esuka kwiingcambu ze-burdock
Le mveliso inceda nge-seborrhea enamafutha, kunye nokulahleka kweenwele, kunye ne-dandruff. I-balm inceda ukuqinisa iinwele kwaye izalise iinwele ezinamavithamini abalulekileyo.
Izithako: ingilazi yamanzi, i-10 okanye i-20 amagremu weengcambu eziqingqiweyo ze-burdock.
I-Zalem izimpompo ze-burdock amanzi abilayo, zibeke umlilo obuthathaka kwaye ubilise imizuzu eyi-10 okanye-15. Susa emlilweni. Xa umhluzi uphupha, ubunzima. Umhluzi olungiselelwe uhlanjululwe kwiingcambu zeenwele 2 okanye kathathu ngeveki emva kokuhlamba. Ukongeza, lo mhluzi ususa intloko yakho.
I-Balm evela kumama-kunye nomama wesibini kunye nenambuzane
Izithako: iipunipoli ezi-2 zamagqabi anomileyo okanye aphelileyo, iipunipoli ezi-2 zamagqabi omileyo okanye amatsha omama nonina, iglasi yamanzi abilayo.
Siya kuthulula amaqabunga ngamanzi abilayo, makhele i-15 okanye imizuzu engama-20, ngoko ke. Ukunyuswa okulungele ukuxubha kwiingcambu zeenwele emva kokuhlamba i-1 okanye 2 ephindwe ngeveki.
Izithako: iglasi yamanzi abilayo, isipuni se-1 samagqabi enamephu enomphunga.
Siza kuzalisa amaqabunga enetha ngamanzi abilayo kwaye sifake ihora eli-1. Emva koko ukufakelwa kwamanzi kufakwe. Ubhalsamu uhlambe emva kokuhlamba kwisikhwama 2 okanye kathathu ngeveki. Izinwele ke musa ukuzisula.
I-balm ye-horsetail kunye ne-arnica
I-Balm iyancipha inkqubo yokulahleka kweenwele, kwaye ikhusela ukubonakala kwintsimbi.
Izithako: iikomityi ezimbini zokupheka kwamanzi, i-1punipoon arnica izimbali, i-1pox
Salting arnica kunye ne-horsetail ngamanzi abilayo, ubilise ngokushisa okuphantsi kwemizuzu emi-5 okanye imizuzu engama-7, masiphumelele kwaye sihluthe. Ukukhulelwa komphumo kubangelwa kwiingcambu zeenwele ezi-1 okanye iiyure ezingama-2 ngaphambi kokulala.
Izithako: iipuniji ezi-2 zamanzi, i-root horseradish.
Siyicoca ingcambu ye-horseradish kwi-grater encinci, de kube sifumana i-gruel, yifake ijusi. Siza kuthulula ijusi kwiitya ze-ceramic kwaye ungeze amanzi aphekiweyo. Umxube obangelwayo udibene kakuhle. Ukusebenzisa i-cotton swab, i-wax kwiingcambu zeenwele. Emva kwemizuzu engama-20 okanye engama-30, hlamba intloko yakho nge-slurry yesonka esingumnyama.
Le mveliso inika kakuhle, ibonakala kwaye ikhanya kwiinwele, iphucula umjikelezo wegazi we-scalp, iyomeleza iinwele.
Iimaski ezisuka kwimifuno yeenwele
Zonke iimaski zasekhaya zisetyenziselwa ukucoca iinwele. Ngaphambi kokusebenzisa imaski, hlamba iinwele nge-shampoo uze wome ithawula. Ngamawele amancinci amancinci, sebenzisa imaski.
I-mask i-carrot yemvelo yeenwele eziqhelekileyo
Izithako: iipunipoli ezi-2 zeermon, i-tablespoons yeerrot.
Hlanganisa yonke into uze ungeze i-cup 1 ye-decoction ye-peppermint. Emva kokuhlamba, kathathu umxube kwizinwele, ubambe imizuzu emihlanu kwaye zonke zihlanjululwe kakuhle. Le mask yasekhaya isebenzisa ukukhula kweenwele.
Ubisi busika ngokuchasana nokulahlekelwa yintlungu
Izithako: iimbumba ezi-2, iibhepuni ezimbini ze-burdock ioli kunye nee-2 teaspoons zobusi.
Hlanganisa kwaye udibanise kwisikratshi, kwaye emva kwemizuzu engama-40, uhlambe. Senza imaski kanye ngeveki, kwiinyanga ezimbini okanye ezintathu.
Imaski ye-thyme ngeenwele eziqhelekileyo.
Izithako: ½ ilitha yokubilisa ngamanzi amaminerali, ii-handfuls ze-thyme isityalo.
Iingcambu ezimbini zengca ziza kutshatyalaliswa emdakeni kwaye zityhale i-½ ilitha yamanzi abilayo amaminerali, epholile kunye noxinzelelo. Emva kwesinye ukuhlamba, siya kufaka ukunyuswa kweentloko kwaye siyibophe intloko ngetayili imizuzu eyi-15.
Imaski ye-Herbal yokuqinisa iingcambu zeenwele
Izithako: thabatha isipuni se-1 samacembe e-nettle kunye neentyantyambo ze-linden, i-chamomile, uthele 1 indebe yamanzi abilayo. Emva kwemizuzu engama-30, udidi uze ungeze amaconsi ambalwa amavithamini A, B1, B12 kunye no-E. Emva koko umququze isonka esincinci se-rye kwisingxube kwaye emva kwemizuzu eyi-15 siya kufaka kwizinwele. Sifaka ikhava ye-polyethylene phezulu, emva kweyure eli-1 okanye 1.5, sihlamba intloko ngamanzi. Le maski iqinisa iingcambu zeenwele.
Mask eyenziwe ngobusi, i-yolk kunye ne-cognac kwiintlungu zokulahleka
Izithako: 1 i-dessert spoon yobusi, i-yolk 1, 1 isipuni se-cognac.
Hlanganisa izithako. Siza kufaka umxube entloko imizuzu engama-20, uze uhlambe ngamanzi.
I-mask evela kumama-kunye nomama wesibini ngokuchasene nentlungu
Thatha iipunile eziyi-3 zamacembe e-coltsfoot uze uthele iitre 1 zamanzi ashisayo uze ugxininise imizuzu engama-30 okanye engama-40, uxinzelele kwaye usetyenzise kwiingcambu zeenwele ezicocekileyo ubuncinane 1 okanye 2 ephindwe ngeveki.
Imaski eyenziwe nge-aloe kunye nejusi yobusi ngenxa yeenwele ezibuthathaka
Thatha isipuni se-1 kwicandelo ngalinye kwaye udibanise kakuhle, faka isicelo sokuhlamba iinwele. Ubambe ngaphezu kwemizuzu engama-10, kwaye uhlambe ngamanzi. Siyilungiselela umxube wokusetyenziswa kwexesha elizayo kwaye uyilondoloze kwifriji.
Isiqwenga se-oily sokukhula kweenwele
1 isipuni se-honey, i-yolk eluhlaza kunye nepuniki ye-1 yesoyela encibilikileyo yonke into exutywe kakuhle kwaye ibhaqe ubunzima kwiingcambu zeenwele.
Musa ukuhlambulula, ngeyure eli-1 siya kulufaka kakuhle intloko. Emva koko hlambulula iinwele nge-infusion yezityalo ezivela kumagqabi e-birch, i-hops okanye i-chamomile (ukukhetha ukusuka). Ukuhlambulula ngcono nge-chamomile, inomphumela wokuchasana, ukuchithwa kweengcambu ze-burdock kuya kunika amandla ezinwele kwaye kuphephe i-fungus. I-mask, xa yenziwa yedwa, isiqinisekiso sokuvuselela kunye nobume.
Ubumba bemvelo yomoya kwiviniga ukuqinisa iingcambu zeenwele
Iipuniwe ezi-3 zeengcambu ze-aureus, uthele i-½ ilitha ye-viniga ye-9% kwaye upheke ngokushisa okuphantsi kwemizuzu eyi-15. Gxina, pholisa kwaye uhlabe kwiingcambu zeenwele.
Umaski wokukhula kweenwele kwi-radish
Natur iingcambu zeenwele kunye nejusi yomsila omnyama, njengemizuzu engama-30 kunye nentloko ehlanganiswe kunye ne-smoem. I-Radish yindlela efanelekileyo yokukhula kweenwele.
Ubisi bemvelo yobisi obomvu okanye i-kefir yokukhula kweenwele
I-Kefir ihamba ngeengcambu zeenwele, zifudumise intloko kunye ne-cellophane, i-kerchief efudumele kwaye ushiye i-1.5 iiyure. Emva koko sihlamba i-decoction yemifuno. Senza iinkqubo kanye ngeveki kwiiveki ezi-5 ukuya kwii-7 kwaye ke iinwele zakho ziya kuvuyela ubuhle bayo.
Mask ofardard kwiintlungu zokulahleka
Thatha isipuni se-1 se powardard, i-yolk kunye ne-2 tablespoons yeeyi ezinamandla. Siza kubeka i-30 imizuzu. Kuya kutshiswa. Emva koko sihlamba ngamanzi, i-shampoo ayifuni. Senza ixesha eli-1 kwiintsuku ezi-3 okanye ezine, de kubekho umphumo oqhubekayo. I-Mustard iyisisombululo esifanayo sokulahleka kweenwele.
Mask of yolk and henna, ukukhula kweenwele
Siza kuqhawula i-henna kwikhofi (i-hair-fair, i-dark-hair - nje ngamanzi). Siza kwengeza izikhuni ezi-2, siza kufaka i-mush ngeenwele ezomileyo, siya kuzifaka ngefilimu, siza kufaka kwi-cap. Emva kwemizuzu engama-15 okanye engama-20, hlamba intloko yakho ngaphandle kwe-shampoo. I-Henna yokukhula kweenwele kufuneka ibe ngumbala.
Umaski weoli ye-castor, i-pepper ebomvu kunye ne-herbal tincture yokukhula kweenwele
Thatha i-1 taspoon tincture ye calendula, unokwenza i-tincture ye-eucalyptus, i-chamomile, i-3 okanye i-5 iipuni zeoli ye-castor. I-Tincture ingathatyathwa yipuni ye-vodka okanye i-cognac. Ngaphezulu 1 ithisipuni yepilisi ebomvu ebomvu, amaconsi ambalwa eoli efunekayo. Sihlala kwiinwele 1 okanye iiyure ezingama-2.
Mask ukukhula kweenwele kwisonka esimnyama
Thatha i-2 okanye i-3 yeesonka zesonka kwaye uyiguqule emanzini, xa ithambisa, siya kulula izandla zethu. Ukufudumala okuncane, ngoko kwakungekho kubanda, kodwa kungabi kushushu, kongeza ii-drops zeoli ye-camphor. Kwaye konke oku kuya kufakwa entloko phakathi kwemida, ukuze intloko ifudumele. Emva koko ugqoke isikhwama se-cellophane, phezu kwetawuli uze ubambe malunga neyure eli-1. Gxuma ngokukhawuleza kwi-basin, uze uhlambulule. Umaski wokukhula kweenwele ezivela kwisonka esimnyama zazidume kunye nogogo.
Umaski wokutshisa i-pepper kwiintlungu zokulahleka
Kanye kwiintsuku ezili-10 sitshintshisa iingcambu zeenwele kunye nejusi yokutshisa ipepper, gcina inwele kwiyure enye, uze uhlambe.
I-mask yemvelo ephuma kwioli ye-burdock kunye ne-tincture ye-pepper enobubabayo yokukhula kweenwele
Thatha iipunipoli ze-2 zeoli ye-burdock, iipunipoli ezi-2 zamanzi abilisiwe, iipunipoli ezi-2 zetinctile ye-pepper pepper. Gubha kwiingcambu zeenwele. Shiya ngeyure eli-1. Uya kubhaka. Izinwele azihlaziyi. Shampoo nge shampoo.
I-Mask kwioli yeoli kunye nejisi lemon kwiintlungu zokulahleka
Sithatha umlinganiselo ofanayo wejisi lemon kunye nomnquma. Sifaka intloko kwiingcambu, sibophe intloko size sishiye ubusuku. Ngentsasa siya kuhlamba iintloko zethu. Siza kususa i-decoction ye-oak bark.
Umaski wokuphela kweenwele
Ininzi imaski yeenwele ifaka phakathi kweso sityalo se-oli-castor, umnquma, i-almond, i-burdock. Yinqumle ngokucacileyo intlanzi - nettle, i-St. John's wort, i-chamomile, amaqabunga e-birch kwaye uthele i-½ indebe yeoyile yemifuno. Vala ngokukhawuleza ibhokhwe uze ugxininise endaweni emnyama ubuncinane ngeveki. Emva koko sinobunzima. Okanye sinokuyifaka endaweni ye-mask nge-compress eyenziwe ngamafutha omnquma atshisayo kunye nokongezwa kwincinci ye-lemon juice. I-yolk efanelekileyo, ifakwe nge-dessert spoon yeoli ye-castor.
Umaski weenwele ezinonakele, ezinemibala
Thatha i-yogurt eqhelekileyo. Shampoo yethu intloko, sebenzisa i-kefir kwiingcambu ukuya kwiingcebiso. Siza kuwufaka kwi-polyethylene, siya kuwubopha nge-til towel. Sibambe imizuzu engama-40. Senza kanye ngeveki. Emva koko uhlambe uze uhlanza i-shampoo encinane.
Umaski wokukhanyisa iinwele, ukunciphisa umbala obomvu emva kokubola
Finyisa ijusi yamakhempe amnandi, gcoba iinwele. Musa ukuchukumisa iiyure ezimbalwa.
Ngoku siyazi ukuba imiski kunye nezilwanyana zeenwele kufuneka zenziwe ngonyango lwezonyango zabantu. Ezi maski ziya kunceda ukuqinisa iinwele, ukukhusela ukulahleka kweenwele kunye nokubonelela ngeenwele. Masisebenzise ezi zokupheka kunye nokuphucula imeko yeenwele.
Iimpawu zeeNwele, umbala weenwele, ukunakekelwa, iingcebiso
Unokukhetha njani ikhefu elifanelekileyo?
Unyango lwezonyango zomntu ezinomileyo
Le miqondiso ye-zodiac ilindele inhlanhla engaqinisekanga ngo-Agasti 2017
Amasango, yeka: ulungiswe uJulia Nachalova obanjwe kwi-photoshop
I-9 ilawula indlela yokwenza iinwele zihle
Ukupheka kwee-pickle, izikhalazo ebusika
Isitya sefruit "Pond kunye neenqwelo"
I-creamy semifredo enelamula